XOG: Maxaan ka ognahay Safarka deg deg ah ee M/weynaha PL ku tagay G. Barri?
September 22, 2019 NEWS 2
BOOSAASO(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay saqdii dhexe ka baxay magaalada Garoowe ee caasumada Puntland, isagoo ku sii jeeda magaalada Boosaaso, wuxuuna halkaas galay aroornimadii hore ee saaka, waxaana uu maanta bilaabayaa […]
XOG: Jubbaland & Puntland miyaa looga maarmay howlaha Geedi socodka DF Soomaaliya?
MUQDISHO(P-TIMES) – Saacadihii lasoo dhaafay Madaxda ugu sareysa dawladda Faderaalka Soomaaliya, gaar ahaana Madaxweynaha, Raysalwasaaraha, Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Faderaalka ayaa kulamo la yeeshay madaxda dawlad gobaleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo gobalka Banaadir. […]
DAAWO: Maxay ka wada hadleen M/weyne Farmaajo, Xaaf, Waare, Laftagareen, Filish & Kheyre
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa casho sharaf u sameeyey Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed iyo Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo soo gaaray Caasimadda, iyadoo ay ka soo qeyb […]
AKHRISO: Beesha Caalamka oo soo dhaweysay talaabo ay qaaday Xukuumadda Soomaaliya, kuna amaantay.
MUQDISHO(P-TIMES) – Wakiilada caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan caalamka ayaa soo dhaweeyey talaabada ay dawladda Faderaalka Soomaaliya geedi socodka wanaagsan ugu jirto,sidii looga cafin lahaa deynta lagu leyahay dalka mudada dheer, waxayna amaan […]
XOG+AKHRISO: Xaggee laga keenay Lacagta Dawlad Gobaleedyada ay siisay DF Soomaaliya?
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda Maaliyada ayaa qoraal kasoo baxay 16kii bishan waxaa si cad loogu sheegay in aysiinayaan dawlad gobaleedyada dalka min Halmalyan oo Doolar, taas oo ah lacagta tooska ah […]
DAAWO: Waxgaradka Jubbaland oo fariin adag u diray Farmaajo, uguna Hanjabay.
KISMAAYO(P-TIMES) – Odayaasha dhaqanka ee Jubbooyinka oo shir jaraa`id qaarkood ay ku qabteen magaalada Nairobi, waxay si cad u sheegeen in ay aqoonsan yihiin doorashadii Axmed Madoobe ee 22kii bisha August, waxayna sheegeen in ficilada […]
WARBIXIN: Awoodda Iiraan & Sacuudiga ee xagga Dagaalka?
In kasta oo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay horumarisay hannaan dagaal oo isku dhaf ah oo ay ku taageerayaan taageero xagga cirka ah, Tehraan waxay kasbatay khibrad dagaal oo xagga dagaalka ah sannadihii u dambeeyay dhowrkii […]
DAAWO: Puntland oo shaqo siisay Shaqaale ay ceyrisay Somaliland, kuna dhawaaqday.
GAROOWE(P-TIMES) – Dawladda Puntland ayaa sheegtay in ay soo dhaweynayso cid kasta oo Soomaaliyeed oo shaqo qabanaysa, waxaana Shaqaale dhawaan laga ceyriyey madaarka Hargeysa ee Somaliland ay hadda shaqo kaheleen garoomada diyaaradaha ee Garoowe iyo […]
DAAWO: Mid kamid ah Beelaha Galmudug wax ka dhistay oo ka baxday, Fariin-na u dirtay Farmaajo & Kheyre.
GAALKACYO(P-TIMES) – Shirar saacadihi lasoo dhaafay u socday waxgaradka iyo Odayaasha dhaqanka Beesha Sacad ee Koonfurta Gobalka Mudug, ayay kasoo saareen warsaxaafadeed ku wajahan xaaladda Galmudug, waxayna gabi ahaanba cadeeyeen in aysan waqtigan qeyb ka […]
DAAWO: Ruushka miyuu dib u dhisayaa ciidamadii xooga dalka Soomaaliyeed?
Dawladda Ruushka ayaa balan qaday dibu dhiska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, waxayna ka taageeraysaa qorshahan dawladda Faderaalka Soomaaliya, sidda uu sheegay safiirka Soomaaliya u jooga dalkaas Cabdullaahi Maxamuud Warsame. Ruushka ayaa horey uga mid ahaa […]
Iiraan oo ku dhawaaqday war ku wajahan Sacuudi & Mareykanka.
Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka Iran ayaa sheegay cid kasta oo dhulkeeda dagaal ku soo qaaddo iney diyaar u tahay iney burburiso. Hadalka Iran ayaa ku soo beegmaya kaddib marki uu Mareykanka shaaca […]
DAAWO: M/weyne Farmaajo maanta yuu Musuqmaasuq ku eedeeyey?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay Sharciga Dhismaha Guddiyada Madaxa-bannaan ee La Dagaallanka Musuqmaasuqa heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay dhibaatada uu musuqmaasuqu ku hayo dowladnimada iyo horumarka […]
XOG: M/weyne Farmaajo oo heshiisyo waa weyn la saxiixan doona dalka Ruushka iyo Faahfaahin laga helay.
MUQDISHO(P-TMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u socdaalaya dalka Ruushka oo xili ahaa mid kamid ah saaxiibka ugu weyn ee ay Soomaalidu ku lahayd caalamka, gaar ahaana waqtigii dawladdii Kacaanka, uuna dhisnaa Midowga […]
Inna keen ku geeyee bariga fog ee gobolka Mudug, dacalka badweynta Hindiya, halkaa oo ay ku taallo magaalo mustaqbal weynleh. Goor fiidki ah oo aan qiyaasayo iney 8:00 fiidnimo ahayd ayaannu ka safarnay Garoowe, caasimadda […]
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay Sharci muhiimad weyn ugu fadhiya Soomaaliya.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qalinka kuduugay Sharciga la dagaalanka Musuqmaasuqa iyo Ciribtiisa oo ay soo meelmariyeen labada Aqal ee baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya, waana kii labaad ee uu saxiixo Madaxweynuhu tan […]
Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee dalka Soomaaliya James Swan ayaa ku dhiirigeliyay dhamaan dadka Soomaaliyeed Inay gacan ka geystaan Nabad Kusoo Dabaalidda Soomaaliya War Saxaafadeed uu soo saaray James Swan […]
BADHAN(P-TIMES) – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya hub la sheegay in uu ka dagay xeebta deegaanka Laasqoray ee gobalka Sanaag, taas oo la sheegay in ay leeyihiin qaar kamid ah ganacsatada deegaanada gobalkaas […]
GAROOWE(P-TIMES) – Guddiga KMG ah ee diyaarinta doorashooyinka Federaalka, kana katirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey kusugnaa magaalada Garoowe ee Puntland, iyagoo halkaas latashiyo kala duwan kula yeelanayay qeybaha bulshada, baarlamaanka iyo Xukuumadda deegaanadaas, […]
September 21, 2019 shiine maxamed 0
Taarikhda Inta Maamulka Soomaliland Gooni isku Taaga Ku Dhawaaqay waxaa hada ka Taagan Xaalad faraha Ka Baxday oo Cidina Marayn Karayn halkay Joogto,Muuse Biixi Cabdi oo nin ciidamada In badan Kusoo Qaadatay Ahaa,Kuna Soo Bar […]
DHUUSA(P-TIMES) – Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkeystay in ay guddiga xulida xildhibaanada cusub ee Galmudug ay magacaabayso Xukuumadda Faderaalka, ayna tahay in ay beeluhu sidaas ugu soo gudbiyaan liiska xildhibaanada […]